Obere igwefoto Nledo - Zoro Ego akpa kamera 170 Igwe Ọdụdọ Wide Angle Lens (SPY018) | Ngwọta OMG
OMG Obere Nweta igwefoto - Zoro Ezo aka n'akpa uwe pensụl 170 Degree Wren Angle (SPY018)
Ezi 1080P Full HD Super Clear Video Vidiyo: 1920x1080P na 30fps na 170 ogo na-ele anya oghere dị elu iji weghara ihe ka ukwuu n'oge ndekọ. Na ebe a na-agbanye n'ọkụ (WDR) nke a nụchara anụcha nwere ike ịmepụta ihe ka mma ma ọ bụ vidio dabara na teknụzụ zuru oke.
Njikọ Wi-Fi na Lee: Ihe wuru na wifi modul nyere onye ọrụ ohere iji igwefoto site na ekwentị mkpanaka (Andriod ma ọ bụ iOS na ikpo okwu dakọtara), gbanwee ikiri elele igwefoto, iyi ndụ ma ọ bụ vidio site na free ngwa ngwa.
Ọrụ Multiple Ngwaọrụ Na-edekọ: Iji aka dekọọ vidiyo ma ọ bụ jiri foto mee ihe dị ka igwefoto omume; debe ka nchọpụta ọrụ melitere na-eji dị ka igwefoto nchebe ụlọ ma ọ bụ malite ọrụ ndekọ ndekọ ihe dịka dictaphone n'oge nzukọ ma ọ bụ vidiyo vidio ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Batrị a na-agbanye n'ime ya: Enwere ya na batrị 560 mAh na-ebugharị, jiri aka na-edekọ oge ruo 90 nkeji, ma ọ bụ ruo ihe karịrị 20 awa iji gbakwunye ụlọ akụ ike nchịkwa 10000mah (ụlọ akụ adịghị etinye). Igwefoto chọrọ kaadị sd iji rụọ ọrụ.
Ọdịmma ma dị mfe iji: Ụdị mpịakọta H.264 iji hụ na mmiri vidio dị ukwuu; Edekọdere ihe ndekọ dị ka 3 / 5 / 10 nkeji obere vidiyo dị ka ịchọrọ. Nkwado ruo 64GB micro SD kaadị na ụbọchị / oge watermark bụ kemeghi. Nkwado mmepụta HDMI dị (Micro sd card and HDMI cable not included).
Jiri aka dee vidiyo ma ọ bụ jiri foto mee ihe dịka igwefoto ihe.
Debe ka nchọpụta rụọ ọrụ na-emegharị na-eji dị ka igwefoto nchedo ụlọ.
1920 x 1080P na 30fps na 170 ogo na-ele anya elekere obosara iji weghara ihe ka ukwuu n'oge ndekọ.
Malite ọrụ ntaneti na-eji dị ka dictaphone n'oge nzukọ ma ọ bụ vidiyo vidio ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ngwunye WiFi wuru na-enyere onye ọrụ aka iji igwefoto site na ekwentị mkpanaka (njikorita gam akporo ma obu iOS).
Oge vidio / oge vidio nwere ike idozi.HDMI mmepụta dị (HDMI eriri anaghị etinye ya).
Edekọdere ihe ndekọ dị ka 3 / 5 / 10 nke obere vidiyo dị ka ịchọrọ ma ọ na-akwado kaadị micro SDNUMGBGB (kaadị SD adịghị agụnye).
WF92 wuru na batrị 560 mAh batrị, jiri aka na-edekọ oge ruo 90 nkeji, ma ọ bụ karịa karịa oge 20 iji tinye aka na ụlọ akụ ike (10000MA).
Full HD Wearable Nledo igwefoto:
1920X1080p wearable igwefoto onyunyo zoro ezo, dị mfe iji na-edeba na iji ejiji.
Ọrụ Wifi jikọtara:
Site na ntinye Wifi gbanwee ule nyocha nke igwefoto, iyi ndu ma obu bu vidio site na free ngwa ngwa.
Batrị arụnyere n'ime batrị:
Ejiri batrị 560 mAh na-ebugharị, na-edekọ aka ruo oge 90.
Ogo ngwaahịa: 4.5 x 1 x 0.6 sentimita
Item arọ: 1.8 ounces
SPY018 - Ezobe Ebube Peneti foto igwefoto
Nzuzo 9143 8 Echiche Taa